ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဒါဟာမစ္စတာပတ်သက်လာလျှင်ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ Sense အနီရောင်အလံနိုင်သလား. မှန်သော?
သင်တစ်ဦးက extension အဖြစ်သင့် furry မိတ်ဆွေတွေ့မြင်လျှင်, သင့်ရဲ့ခွေးကိုသင့်ရဲ့နေ့စွဲကြိုက်မပါဘူးဆိုရင်ကြောင့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, သင်တစ်ခုခုမသတ္တိကို. အများစုကသင့်ရဲ့အိမ်ကိုပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်အတွင်းကယုံကြည်, သင့်ရဲ့ခွေးကိုသင့်ရဲ့ရက်စွဲမှ growls နှင့်ရှောင်လျှင်, တစ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဘယ်တော့မှမဖြစ်. အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြစ်ကြောင်းသူ amiss တစ်ခုခုအာရုံခံ. သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးသင်၏ဦးခေါင်း၌ပယ် သွား. သင်တို့အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်ပေါ်မှာ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာ. ညာဘက်လက်ျာမက, နောက်ဆုံးတော့.
ကျွန်တော်တို့ဟာခွေး၏ဗီဒီယိုများဖိနပ်တရံမှသတင်းစာမှတစုံတခုကိုများကိုရယူ watch, ရာ၌ကွင်းမှတဆင့်ခုန်နဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်၏လှုပ်ရှားမှုများကို mimicking. ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့အလားအလာဆုပ်ကိုင်အပေါင်းတို့နှင့်ခွေးကအဲဒီအံ့သြစရာ Feat ၏ပင်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်သောအယူအဆအတွက်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားနေကြတယ်. ဟုတ်ကဲ့, သူတို့က. သည်ထိုမျှလောက်လေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်မိသားစုခွေးကိုသူတို့ရဲ့ကလေးထိန်းဆီသို့ဦးတည်မှထုတ်ပြန်သောပြုမူသည်မည်မျှလောက်ဖတ်, Khan က, နှင့်မတော်မတရားပြုမှုနောက်ဆက်တွဲရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတိပ်အပေါ်ဖမ်းမိ. ဒါပေမဲ့ဒီအနောက်မှာ5Khan ကလှည့်ပတ်လျှက်နှင့်သူမလုပ်နေတာအရာကိုတောင်သတိမပြုမိလ, ကနဦးအစည်းအဝေးအပြီးမချက​​်ချင်းတုံ့ပြန်မှု.
လူအတော်များများသည်မိမိတို့ခွေးစိုးရိမ်ရေမှတ်ခံစားနိုင်ပါတယ်ထင်နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုမှတစ်ဦးကိုခြိမ်းခြောက်သောသူတို့အဖို့သိပ်ကြင်နာစွာမယူကြဘူး. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မွေးမြူရာစုနှစ်ချီ၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, လူမျိုးမှအစဉ်အဆက်လက်ဆင့်ကမ်းဆင်း. ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့ပိုင်ရှင်တွေကို save လုပ်ဖို့ကိုခုန် pooches အကြောင်းကိုဖတ်, မကြာခဏကိုယ့်ကိုယ်စွန့်.
သို့သော်ငြားလည်း, ကဲသာဘုရင် Millan ကြည့်လျှင်, နာမည်ကျော်ခွေး Whisper ငါ့အားဘာမှမဆုံးမသွန်သင်တော်မူပြီ, ကပိုင်ရှင်တွေကသူတို့မကြာခဏခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဘာသာစကားနားမလည်ကြဘူးကြောင်းနှင့်သူတို့ဖို့မျှော်လင့်အဖြစ်သူတို့လောကသလောက်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူသားရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးကလူကိုမဖြစ်ကြောင်းကိုမေ့လျော့သောဤမျှလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားချစ်မြတ်နိုး. သူကခွေး. တိကျမှန်ကန်စွာခွေးကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်, ထိုသူတို့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်, ဟုထင်ရသောမဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေမျိုးမှပိုင်ရှင်တွေကိုကယ်ဆယ်.
ကဲသာဘုရင် Millan ကရေးသားခဲ့သည်, "ကျူးကျော်ခွေးရဲ့စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်လွှမ်းမိုးခြင်းမှအဓိကအား. ခွေးရဲ့အလိုမကျခွေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကင်းမဲ့ခြင်းကနေဆင်းသက်လာ, နှင့်ခွေးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအေးဆေး-အထက်စီးခေါင်းဆောင်မှုမရှိခြင်းထံမှလာ၏။ "ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဒီတုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးတော်မူကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်မည်?
တစ်ဦးကိုခွေးဘေးကင်းလုံခြုံရေးလမ်းညွှန် – အမေရိကန်တွေ Kennel ကလပ်အားဖြင့် the Dog ရဲ့စကားကိုနားထောင်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းအကြံပြု, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခွေးကို "က၎င်း၏ခြံပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်မြည်တမ်းသို့မဟုတ်ကိုက်စေခြင်းငှါ" ဒီခွေးကို၏တုံ့ပြန်မှုသေချာပေါက်တိကျတဲ့လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုမဟုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်, သင့်ရဲ့ခြံထဲမှာဖြတ်ကျော်မည်သူမဆိုတစ်ဦးကျူ​​းကျော်လာသူအဖြစ်ရှုမြင်.
Behavourists ဒီခြံစည်းရိုးရဲ့နှစ်ဘက်စလုံးပေါ်မှာထိုင်လျက်. သင်သာသင့်ရဲ့ခွေး datedar တိကျမှန်ကန်သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်. သင်တို့မူကား, မစ္စတာပစ်လိုက်မီ. တံခါးနားထဲကထွက်နိုင်သည့်အလားအလာ,, သင်သည်သူ့ကိုသူမစ္စတာသည်ကိုသက်သေထူဖို့အခွင့်အလမ်းပေးချင်စေခြင်းငှါ,. မှန်သော.